LG သည် နောက်ဆုံးပေါ် ရေဆေးခြင်းနှင့် အခြောက်ခံခြင်းဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းနည်းများဖြင့် အဝတ်လျှော်ခြင်းဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံကို မြှင့်တင်ပေးသည်
Honor က Magic V ခေါက်နိုင်တဲ့ စမတ်ဖုန်းကို ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
Google သည် Apple ၏ iMessage ပလပ်ဖောင်းတွင် Android အသုံးပြုသူများကို ဒုတိယတန်းစားနိုင်ငံသားများကဲ့သို့ ဆက်ဆံရာတွင် အပြစ်ရှာနေသည်။
Linksys Velop AX4200 Mesh WiFi စနစ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Emirates Motor Company သည် Yas Island တွင် AMG Performance Tour Gold Edition ဖြင့် UAE ၏ နှစ် ၅၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ်
Lamborghini Dubai အရောင်းကိုယ်စားလှယ်နှင့် Pop-up Lamborghini Lounge ကို ဒူဘိုင်းတွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
Audi Q5 နှင့် Q5 Sportback မော်ဒယ်အသစ်များကို Abu Dhabi နှင့် Al Ain တစ်ဝှမ်းရှိ အရောင်းပြခန်းများတွင် ယခုရရှိနိုင်ပါပြီ။
သင့် Facebook ပရိုဖိုင်ပုံအား stalkers များမှ မည်သို့ကာကွယ်နိုင်မည်နည်း။
Instagram တွင် 'Feed Not Loading' error ကို သင်မည်သို့ ပြင်ဆင်နိုင်မည်နည်း။
Snapchat တွင် အသုံးပြုသူအမည်ဘေးရှိ အပြုံးမျက်နှာက ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။
TechPlugged.com, (“ ငါတို့”၊ “ ငါတို့”၊ “ ငါတို့” စသည်) သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ရန်ထိုက်တန်သည်ဟုယုံကြည်သည်။ ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ပေါ်လစီသည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့်မျှဝေခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောကျွန်ုပ်တို့၏အလေ့အကျင့်များကိုဖော်ပြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များစုဆောင်းခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့်ထုတ်ဖော်ခြင်းနှင့်ဤမူဝါဒတွင်ဖော်ပြထားသောသီးသန့်တည်ရှိမှုအလေ့အကျင့်များကိုသဘောတူခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤသတိပေးချက်အားအသိပေးချက်မပါဘဲနှင့်အချိန်မရွေးဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်မူဝါဒကိုပြောင်းလဲပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများအကြားကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုဖလှယ်နိုင်ရန်အတွက်ဖိုရမ်တစ်ခုကိုစီစဉ်ပေးနေသည်။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများထံမှကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုနည်းလမ်းများစွာဖြင့်စုဆောင်းသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းပုံစံသို့မဟုတ်အီးမေးလ်မှတစ်ဆင့်သဘောတူညီမှုတစ်ခုသို့မဟုတ်ပြန်အမ်းငွေကိုသင်တင်သွင်းပါကကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏အီးမေးလ်ကိုတင်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်တင်သွင်းသောစာတွင်ပါသောအမည်ကိုတင်ပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်၏အမည်အားဖော်ပြရန်မလိုလားပါကသင်၏တင်သွင်းမှုတွင်၎င်းကိုဖော်ပြနိုင်သည်သို့မဟုတ်သင်၏ပို့စ်တွင်သင့်နာမည်ကိုဖယ်ရှားရန်ကျွန်ုပ်တို့အားတောင်းဆိုနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မကြာခဏဆိုသလိုသင့်အားပြိုင်ပွဲများသို့ ၀ င်ရောက်နိူင်ပြီးသင်အောင်မြင်သူတစ် ဦး ဖြစ်ပါကသင့်အားအီးမေးလ်ဖြင့်အကြောင်းကြားလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်မှတ်ချက်တစ်ခုတင်ရန်မှတ်ချက်ပေးသူများသည်အမည်ဝှက်ဖြင့်မှတ်ပုံတင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်သင်မှတ်ချက်ပေးသောအခါ၊ သင်၏မှတ်ချက်များနှင့်သုံးစွဲသူအမည်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်အသုံးပြုသူများအားလုံးကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အခါအားလျော်စွာကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများအတွက်ပြိုင်ပွဲများကိုကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်အောင်မြင်သူတစ် ဦး ဖြစ်ပါကသင့်အားအီးမေးလ် (သို့) ပုဂ္ဂလိကစာတိုများကိုအသုံးပြုမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များတွင်ဝင်ရောက်ခြင်းပုံစံကိုဖြည့်ခြင်းဖြင့်သင်ဝင်ရောက်နိုင်သည့်ပြိုင်ပွဲများသို့မဟုတ်ပရိုမိုးရှင်းများကိုလည်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်ပြိုင်ပွဲ ၀ င်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏အောင်မြင်သူဖြစ်ပါကသင့်အားအီးမေးလ်လိပ်စာသို့မဟုတ်အခြားဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များကိုအသုံးပြုမည်။ ပြိုင်ပွဲအတွက်ဆုချီးမြှင့်ခြင်းနှင့်မသက်ဆိုင်သည့်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်းသင်၌ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်။ ဤအချက်အလက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများကိုစစ်တမ်းတစ်ခုအနေနှင့်အသုံးပြုပြီးသင့်စိတ်ကြိုက်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝင်ရောက်ခွင့်ပုံစံတွင်သင်သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုထိုသို့သောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမလိုလားပါကသင်ပြိုင်ပွဲတွင်ပါ ၀ င်နိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြိုင်ပွဲတွင်ပါ ၀ င်ရန်လိုအပ်သောအနည်းဆုံးသတင်းအချက်အလက်များကိုသာသင်ပေးနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းဖိုရမ်များတွင်ပါ ၀ င်ရန်အသုံးပြုသူအမည်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်လျှို့ဝှက်နံပါတ်တို့ကိုထည့်ခြင်းဖြင့်သင်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏တင်သည့်တင်ဆက်မှုများနှင့်အတူသင်၏အသုံးပြုသူအမည်ကိုပြသပါမည်။ အခြားသူများကသင့်ကိုဆက်သွယ်နိုင်ရန်သင်၏တင်သည့်စာများနှင့်သင်၏အီးမေးလ်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြရန်လည်းသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများကိုစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောကိစ္စရပ်များအားအခါအားလျော်စွာမဲပေးနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏မဲရုံတစ်ခုတွင်သင်မဲပေးပါကသင်မည်သည့်မဲရုံများအတွက်သင်မဲပေးခဲ့သည်ကိုသင့်အားအစီရင်ခံရန်သင်၏အဖြေကိုကျွန်ုပ်တို့မှတ်တမ်းတင်လိမ့်မည်။ အချို့သောစစ်တမ်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိအခြားအသုံးပြုသူများကိုသင်၏မဲနှင့်အတူသင်၏အသုံးပြုသူအမည်ကိုပြခြင်းဖြင့်သင်၏မဲကိုလူသိရှင်ကြားဖြစ်စေနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မဲရလဒ်များသည်“ လျှို့ဝှက်” နှင့်မည်သည့်စစ်တမ်းရလဒ်များကို“ လူသိရှင်ကြားရရှိနိုင်သည်” ကိုကြိုတင်ဖော်ပြသည်။
သင်၏အီးမေးလ်များမှတဆင့်စုဆောင်းထားသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်နှင့်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်စစ်တမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုအသုံးပြုခြင်း၊ အတွင်းပိုင်းအသုံးပြုမှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တွဲဖက်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ၊ ကုန်သည်များ၊ မိတ်ဖက်များ၊ ကြော်ငြာရှင်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုများပြုလုပ်သောအခြားတတိယပုဂ္ဂိုလ်များ (နောက်ပိုင်းတွင်တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်“ တတိယပါတီ” သို့မဟုတ်စုပေါင်း“ တတိယပါတီများ”) ။ ဤကိန်းဂဏန်းများနှင့်စုစုပေါင်းအစီရင်ခံစာများသည်သင့်အားပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရခွဲခြားသိမြင်နိုင်သောမည်သည့်အချက်အလက်မဆိုပါလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုနာမည်ကောင်းတတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုက် hosting ကုမ္ပဏီမှလက်ခံသည့်ဆာဗာများပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီများအားလုံးသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည်အခြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားတစ်ခုသို့လွှဲပြောင်းခြင်းခံရပါကကျွန်ုပ်တို့အားသင်ပေးအပ်ထားသောမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုမဆိုထိုငွေပေးငွေယူ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်လွှဲပြောင်းနိုင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုကဲ့သို့သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုရှိခဲ့လျှင်၎င်းအားစုဆောင်းထားသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာပေါ်လစီနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိကြောင်းသေချာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ရန်အဆင့်များကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်တွေ့ရသောအွန်လိုင်းကြော်ငြာများကိုအမျိုးမျိုးသောကြော်ငြာအေဂျင်စီများသို့မဟုတ်ဂူဂဲလ်မှပေးသည်။ ဤတတိယပါတီကြော်ငြာကုမ္ပဏီများသည်သင်စိတ်ဝင်စားသောကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်သည့်ကြော်ငြာများကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့သင်လည်ပတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်မဟုတ်သောအချက်အလက်များကိုသုံးနိုင်သည်။ သင်မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုကောက်ယူသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏တတိယပါတီကြော်ငြာကုမ္ပဏီများကထိုသတင်းအချက်အလက်ကိုမည်သို့အသုံးပြုသည်၊ ဤကုမ္ပဏီများမှအသုံးပြုသောသတင်းအချက်အလက်မရရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ရွေးချယ်မှုများအကြောင်းသင်ပိုမိုသိလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဒီမှာနှိပ်ပါ Google။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှကြော်ငြာများကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်ဂူဂဲလ်သည် cookies များကိုသုံးသည်ကိုသင်သိသင့်သည်။ ဂူးဂဲလ်၏ DART cookie ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့် / သို့မဟုတ်အင်တာနက်ရှိအခြားဆိုဒ်များသို့သင်အလည်အပတ်သွားခြင်းအပေါ် မူတည်၍ သင်နှင့်သင်နှင့်သက်ဆိုင်သောကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအကြောင်းကြော်ငြာများကို၎င်းနှင့်၎င်း၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုကူညီရန်ခွင့်ပြုသည်။ သင်သွားသင့်သည့် DART cookie အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက http://www.doubleclick.com/privacy/faq.aspx။ ဂူဂဲလ်ကြော်ငြာနှင့်အကြောင်းအရာကွန်ယက်သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်လည်းသင် DART cookie ကိုသုံးခြင်းမှရှောင်ရှားနိုင်သည်။ http://www.google.com/privacy_ads.html.
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားတတိယပါတီ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကစီမံခန့်ခွဲခြင်းသို့မဟုတ်စီမံခြင်းဖြစ်နိုင်သည့်ပရိုမိုးရှင်းနှင့်ပြိုင်ပွဲများကိုအခါအားလျော်စွာကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သည်။ ထိုကိစ္စတွင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုထိုကဲ့သို့သောတတိယပါတီမှစုဆောင်းသိုလှောင်ထားနိုင်သည်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့မှထိုတတိယပါတီသို့ထုတ်ဖော်နိုင်သည် ပြိုင်ပွဲ၏ရည်ရွယ်ချက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်တတိယအဖွဲ့အစည်းများသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ထံမှစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုလက်ခံရန်သင်ရွေးချယ်ပါကသင်ပေးသောသတင်းအချက်အလက်များသည်သင့်အားထိုကဲ့သို့သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပစ္စည်းများပေးပို့ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏သက်ဆိုင်သောဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ ဒေသဆိုင်ရာ၊ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ၏တောင်းဆိုမှုများကိုလိုက်နာရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကိုစနစ်တကျလည်ပတ်ရန်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏အခွင့်အရေးများနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများသို့မဟုတ်တတိယပါတီများ၏အခွင့်အရေးများကိုကာကွယ်ရန်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို အသုံးပြု၍ ထုတ်ဖော်ခွင့်ရှိသည်။
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများသို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများအတွက်သို့မဟုတ်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမွမ်းမံ၊ ပြင်ဆင်ရန်သို့မဟုတ်ဖျက်ရန် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ထားသောဇူလိုင်လ 1, 2011 ။